Njirimara, ojiji, mmalite na ụdị plutonic nkume | Netwọk Mgbasa Ozi
Na mbara ala anyị enwere dị iche iche ụdị nkume. Dabere na njirimara ha, mbido na nguzobe ha, a na-ahazi ha dị ka akpụrụ mmiri, nke metamorphic na sedimentary. Ma nhazi ọkwa adịghị otú ahụ. E nwere sub-classifications na-enye nkọwa zuru ezu banyere njirimara, nhazi, ihe eji eme ya, wdg. Dịka ọmụmaatụ, a na-ekewa nkume ndị na-asọ oyi ka nkume ndị plutonic na nkume ndị na-agbọpụ ọkụ. Taa, anyị ga-arara post a dum nkume plutonic.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma njirimara, mbido, nhazi na ihe nke nkume plutonic, isiokwu a bụ maka gị.
1 Isi ego
2 Njirimara nke plutonic nkume
3 Ofdị nkume plutonic
3.3 Nkume Nkume
A makwaara nkume Plutonic dị ka nkume intrusive. Ọ bụ ụdị nkume guzobere site na ngwụsị oge jụrụ nke magma. Igwe jụrụ oyi a bụ akụkụ nke ọrụ na-eme ọtụtụ puku mita miri emi, n'ime ime ụwa. Nkume ndị a bụ nkwenye ma ọ bụ na-abụghị nke nkume mgbawa ugwu, kwa nkume ndị na-adọrọ adọrọ, nke a na-akpọ extrusive. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na nhazi ya na-eme mgbe lacquer na-esi na mmiri mmiri gaa na steeti siri ike ma na-eme n'èzí ma ọ bụ n'elu ụwa.
Nkume ndị a na-eme mkpesa na-egosi dị ka ọtụtụ ndị na-asọ oyi na-adịghị edozi. Nhazi ya na mmalite ya bụ ihe na - emetụta nkwụnye ego nke ụdị na akụkụ dị iche iche anyị nwere ike ịchọta n'ime ime ụwa. A na-ahụta ego ndị a dị ka plutons. E kere ha uzo ato:
Blatolito: ọ bụ ụdị nkwụnye ego kachasị dị na mbara ụwa niile. Elu ya karịrị 100 km2. Mgbanwe nke nkwụnye ego a emeela site na ọtụtụ intrusions. Na ebe a ị nwere ike ịchọta nnukwu ịta nke granite na diorites. Dị ka ọ na-adịkarị, anyị nwere ike ịchọta ya na mpaghara ebe akara ugwu guzobere. Ọ naghị adịkarị na nke nkume akwụ akwụ.
Lacolito: ọ bụ ụdị nkwụnye ego ọzọ nke kwenyere nke ọma na nkume itinye. Ihe omimi yiri nke ero. Nke ahụ bụ, ntọala ya dị ụtọ, mana elu dome sara mbara. Akụkụ ndị ahụ dị ọkara ma ọ na-apụta site na ịkwanye nkume site na magma.
Lopolito: ọ bụ ihe ikpeazụ nkwụnye ego na yiri ka inverver dome. Ọ na-ekwenyekarị nke ọma na eriri uhie. A na-etinye ya na nkume nkume sedimentary n'ihi na ọ na-enwe ọdịdị tubular.
Njirimara nke plutonic nkume
Ugbu a, anyị ga-akọwa ihe ndị bụ isi nke ụdị nkume a kpụrụ na nkwụnye ego ndị a kọwara n'elu. Ha na-adịkarị okirikiri ma ha enweghị oghere. Ha udidi ha siri ike ma ha nwere ihe dị iche iche. Ha dị nnọọ iche iche n'ihi ọtụtụ ụdị kemịkalụ nke anyị nwere ike ịchọta dabere na ụdị magma ebe ọ si malite.
Nkume ndị a bara ụba nke ukwuu n’elu ụwa ma were ya dị ka isi okwute. Nke a bụ n'ihi na nkume ndị a masịrị nguzobe nke nkume ndị ọzọ. A na-ahụkwa ụdị nkume ndị a na mbara ala ndị na-akọ akụkọ dịka Mercury, Venus na Mars na n'ime etiti mbara ala ndị ọzọ dị ka Saturn, Jupiter, Uranus na Neptune.
Ofdị nkume plutonic
Anyị ga-enyocha ụdị nkume plutonic dị iche iche dị na mbara ụwa anyị:
Ọ bụ otu n'ime nkume ndị kachasị ewu ewu. Nhazi ya sitere na ngwakọta nke mineral dịka feldspars, quartz na micas. Ihe ndị a na-eme ka ha sie ike n'ime ala. Ndabere ya siri ike ma nwee ọdịdị kristal. Ọ dị mfe ịkpụcha na ịrụ ọrụ. N'ihi nke a, a na-ejikarị ya eme ihe na kichin na ime ụlọ ịwụ. Ọ bụ ezie na ọ nwere agba na-enweghị ngwụcha, ihe kachasị dị na agba ntụ na ọcha.
Njupụta nke granite dị n'etiti 2.63 na 2.75 gr / cm3. O nwere ike nke karịrị nke marble. N'ihi ike a na ntụgharị a, enwere ike iji ya gwụchaa na ngwa. Ndi Ijipt ochie n’eji puta n’elu konkiri ma mee udiri ihe di ka ite. Dị ka nke a, ha jiri ya maka owuwu na mkpuchi ụfọdụ pyramid. Ndị Ijipt ji granite rụọ ihe a kpụrụ akpụ, ogidi, ibo ụzọ, na ihe ndị ọzọ.
Ekele maka teknụzụ mmadụ, ejirila okwute a rụọ ọrụ na iwu ụlọ. N'ebe ụfọdụ, granite bụ ihe nnọchi maka marble, ka ọ na-adịte aka. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ya na mgbakọ mgbakọ. Ozugbo polished, o nwere oké aesthetic na ọtọ uru.
Typedị nkume plutonic ọzọ. Ọ bụ isi awọ ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba. Ọdịdị ya bụ granular. Ọ nwere ụgwọ dị ala ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere nkume ndị ọzọ na mineral dị ka chromium, platinum ma ọ bụ nickel. Otú ọ dị, a na-eji gabbro eme ihe maka chi ọbụbọ na ịchọ ụlọ.
A na-ahụ nkwụnye ego nke ụdị nkume a n'akụkụ ndị mmadụ bi. Iji maa atụ, enwere ego nke diorite na ugwu Alps ma ọ bụ Ugwu Andes. E tinyekwara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke diorite na Rosetta Nkume dị n'Ijipt.
Taa, a na-eji diorite n'ọtụtụ ọrụ owuwu ihe. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na, mgbe agwakọtara ya na ihe ndị ọzọ, ọ nwere ike ịnweta oke ike, na-akwado ịmalite ọrụ okporo ụzọ. Ọ na-enwe ihe jikọrọ ya na granite, nke mere na a na-ejikarị ya eme nkwadebe maka tebụl kichin. Ọ bụrụ na edoro ha anya n’ịrụ ọrụ polishing, enwere ike iji ha chọọ ha mma n’ime ogige na ebe ọha na eze.
Ihe mejupụtara syenite na nhazi ya na-agbanwe agbanwe. Enwere ike ịchọta okwute ahụ site na okwute nwere ndo dị nfe na ọka ọma, ruo n’okwute na-acha ntụ ntụ nke nwere mkpụrụ osisi ahịhịa amị. Ndị Syenites nwere silica dị ala karịa ka a pụrụ ịchọta na magis granitic. Ọ na-eguzogide ọkụ.
Ọ nwere agba gbara ọchịchịrị. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke jikọrọ ụwa. Ọ nwere o siri ike ọ bụla azụmahịa were. Offọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-eto nnukwu ikike ya iji banye carbon dioxide.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nkume plutonic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nkume Plutonic